Internet Connection ကို WiFi to Desktop, Desktop to Laptop သုံးချင်လို့ — MYSTERY ZILLION
Internet Connection ကို WiFi to Desktop, Desktop to Laptop သုံးချင်လို့
July 2010 edited July 2010 in Idea
ကျွန်တော် အိမ်မှာ WiFi သုံးပြီး Internet ချိတ်ထားပါတယ်။ အိမ်နားက Internet ဆိုင်ကနေ ယူတာပါ။
USB Wireless Adapter ခံပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ Desktop မှာ သုံးပါတယ်။
အဲဒါ နောက်ထပ် Computer တစ်လုံးကို Internet Connection ရအောင် လုပ်ချင်တာပါ။
အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး... နောက်ထပ် Computer တစ်လုံးရရင် ကျွန်တော့်အတွက် လုံလောက်ပါပြီ။
ကျွန်တော့် Desktop မှာ RJ45ပေါက် ပါပြီးသားပါ။ နောက်ထပ်သုံးမယ့် Laptop မှာလည်း RJ45ပါပါတယ်။
Cat5UTP ကို Crossover Cable လုပ်ထားလည်း အဆင်သင့်ပါပဲ။ ကျွန်တော်မလုပ်တတ်တာက OS မှာ Setting တွေ မလုပ်တတ်တာပါ။ သုံးတဲ့ OS က Window XP SP3 ပါ။ တစ်ဆင့်ချင်း သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကိုေ၀မျိုးထွန်းရေအဲလိုသုံးချင်ရင်တော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသွားပြောသင့်ပါတယ်။သူတို ့ကိုပေးတဲ့လစဉ်ကြေးကကွန်တစ်လုံးစာအတွက်ဘဲဖြစ်မယ်လို ့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်အဲဒီအင်တာနက်ဆိုင်ကိုခိုးပြီးတော့နှစ်လုံးမသုံးပါနဲ ့ပိုက်ပိုက်ကဘယ်လောက်မှမရှိပါဘူးကိုယ့်သိပ်ခါကျတာပေါ့။။ peace..........
ဒါများဗျာ Wireless Adaptor ထပ်တပ်ပြီးသုံးလိုက်ပါလားဟင် စိတ်ညစ်ခံနေသေးတယ် အခုနောက်ပိုင်းlaptopတွေမှာ Wi-Fi ရတဲlaptopတွေများပါတယ် passwordသိတယ်မဟုတ်လား ဟီးဟီး
အဲဒီInternet ဆိုင်က နောက်တစ်လုံးကို Share ခွင့်ပေးပါတယ်။ တစ်လုံးမကတောင် Share ခွင့်ပေးပါသေးတယ်။ Connection တော့ ကျသွားလိမ့်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့က Access Point သုံးဖို့တောင် ကျွန်တော့်ကို ပြောပါသေးတယ်။ ဒါပမယ့် Access Point စျေးနှုန်းနဲ့ Cat5UTP ကြိုးဖို့က တော်တော်ကွာနေလို့ပါ။
ပထမဦးစွာ host computer ( ကို၀င်းမျိုးထွန်းရဲ့ desktop computer) မှာ ICS ကို enable လုပ်လိုက်ကြရအောင်။
Right-click the connection that you use to connect to the Internet (ဒီနေရာမှာ USB Wireless Adapter ပေါ့ ခင်ဗျာ)
ဒီအခါ အောက်က message လေး ပေါ်လာမယ် :
When Internet Connection Sharing is enabled, your LAN adapter will be set to use IP address 192.168.0.1. Your computer may lose connectivity with other computers on your network. If these other computers have static IP addresses, it isagood idea to set them to obtain their IP addresses automatically. Are you sure you want to enable Internet
ပြီးတဲ့အခါ client computer (ကို၀င်းမျိုးထွန်းရဲ့ laptop computer) မှာ LAN Adapter IP configuration အတွတ် confirm လုပ်ရပါမယ်။
နောက်ဆုံး အဆင့်မှာ host က share ပေးထားတဲ့ connection ကို အသုံးပြုနိူင်ဖို့ client computer ကို configure လုပ်ပါမယ်။
အဆင်ပြေသွားပြီ အစ်ကို ...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။